Ọmụmụ Ihe — Ọ́bá Akwụkwọ Anyị NKE DỊ N'ỊNTANET
Inyocha Akwụkwọ Nsọ Kwa Ụbọchị—2020
Wenezdee, Julaị 15
Ihu ya na-achakwa ka anyanwụ, uwe elu ya na-enwu gbaa.​—Mat. 17:2.
Jizọs gwara Pita, Jems, na Jọn ka ha duga ya n’ugwu dị oké elu. Mgbe ha nọ ebe ahụ, ha hụrụ ọhụụ dị ịtụnanya. Ihu Jizọs nwuru gbaa dị ka ìhè, uwe ya ana-egbukekwa egbuke. Ihe abụọ yiri mmadụ, nke nọchiri anya Mozis na Ịlaịja, malitere ịgwa Jizọs okwu banyere ọnwụ ọ na-aga ịnwụ na otú a ga-esi akpọlite ya n’ọnwụ. (Luk 9:​29-32) Ígwé ojii malitere ikpuchi ha, ha anụkwa otu oké olu si n’ígwé ojii ahụ. Ọ bụ olu Chineke. Ọhụụ ahụ mere ka anyị matatụ gbasara ebube na ike Jizọs ga-enwe n’ọdịnihu dị ka Eze Alaeze Chineke. O doro anya na ọhụụ a gbara Jizọs ume ma mee ka o nwee ike ọ ga-eji die ahụhụ na ọnwụ ahụhụ ọ na-aga ịnwụ. Ọhụụ ahụ mekwara ka okwukwe ndị na-eso ụzọ ya sikwuo ike, meekwa ka ha jikere maka ọrụ ndị siri ike ha ga-arụ nakwa mmegide a ga-emegide ha n’ọdịnihu. Mgbe ihe dị ka afọ iri atọ gachara, Pita onyeozi kwuru gbasara ọhụụ ahụ iji gosi na ya ka na-echeta banyere ya.​—2 Pita 1:​16-18. w19.03 10 ¶7-8
Usoro Ihe Omume—Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ—2020
Abụ nke 12 na Ekpere
Okwu Mmeghe (1 nkeji)
“Fero Amaghị na Ọ Na-emezu Nzube Chineke”: (Nkeji 10)
Ọpụ. 8:15​—Fero kpọchiri obi ya ma jụ ige Mozis na Erọn ntị (it-2 1040-1041)
Ọpụ. 8:​18, 19​—Fero ekweghị ege Mozis na Erọn ntị n’agbanyeghị na ndị dibịa anwansi ya ekwetala na Jehova ka ha ike
Ọpụ. 9:​15-17​—Jehova mere ka a mara aha ya n’ụwa niile mgbe ọ hapụrụ Fero ndụ ruo oge ụfọdụ (it-2 1181 ¶3-5)
Ihe Anyị Mụtara n’Okwu Chineke: (Nkeji 10)
Ọpụ. 8:21​—Gịnị bụ odudu ahụ Chineke ziteere Fero na ndị Ijipt? (it-1 878)
Ọpụ. 8:​25-27​—Gịnị mere Mozis ji kwuo na àjà ndị Izrel ga-abụ “ihe arụ n’anya ndị Ijipt”? (w04 3/15 25 ¶8)
Gịnị ka ị mụtara n’ọgụgụ Baịbụl nke izu a gbasara Jehova Chineke, ozi anyị, ma ọ bụ ihe ọzọ?
Ọgụgụ Baịbụl: (Nkeji 4 ma ọ bụ ihe na-erughị ya) Ọpụ. 8:​1-19 (th ihe ọmụmụ nke 12)
Vidio Mkparịta Ụka nke Mbụ: (Nkeji 4) Okwu ndị na-ege ntị ga-etinyetụ ọnụ. Kpọnye vidio ahụ. Jụọkwa ajụjụ ndị a: Olee otú onye nkwusa ahụ si zaghachi onye nwe ụlọ mgbe o gosiri na ọ chọghị ige ozi ọma? Olee otú ọ gaara esi nye ya otu n’ime akwụkwọ ndị anyị ji akụzi ihe ma ọ bụrụ na ọ chọrọ?
Mkparịta Ụka nke Mbụ: (Nkeji 2 ma ọ bụ ihe na-erughị ya) Jiri ihe dị na peeji nke mbụ mee ya. (th ihe ọmụmụ nke 6)
Mkparịta Ụka nke Mbụ: (Nkeji 3 ma ọ bụ ihe na-erughị ya) Buru ụzọ mee ihe dị na peeji nke mbụ. Zie ya ozi ọma n’agbanyeghị na o kwuru ihe ndị na-achọghị ịnụ ozi ọma na-ekwukarị. (th ihe ọmụmụ nke 3)
Mkparịta Ụka nke Mbụ: (Nkeji 3 ma ọ bụ ihe na-erughị ya) Buru ụzọ mee ihe dị na peeji nke mbụ. Nye ya akwụkwọ e ji amụ Baịbụl. (th ihe ọmụmụ nke 12)
Abụ nke 74
“Na-adị Umeala n’Obi​—Etokwala Onwe Gị”: (Nkeji 7) Okwu ndị na-ege ntị ga-etinyetụ ọnụ. Kpọnye vidio bụ́ Bụrụ Enyi Jehova​—Na-adị Umeala n’Obi. Unu lechaa ya, kpọọ ụmụaka ndị i bu ụzọ họrọ ka ha gbagote n’ikpo okwu, ma ọ bụrụ na unu nwere ụmụaka, ma jụọ ha ajụjụ banyere vidio ahụ.
“Dịrị Umeala n’Obi Mgbe A Na-aja Gị Mma”: (Nkeji 8) Okwu ndị na-ege ntị ga-etinyetụ ọnụ. Kpọnye vidio bụ́ Guzosie Ike n’Ebe Jehova Nọ, Otú ahụ Jizọs Mere​—Mgbe A Na-aja Gị Mma.
Ọmụmụ Baịbụl Ọgbakọ: (Nkeji 30) jy isi nke 123, na igbe isiokwu ya bụ, “Ọsụsọ Ya Dị Ka Ọbara nke Na-atapụsị n’Ala.”
Okwu Mmechi (Nkeji 3 ma ọ bụ ihe na-erughị ya)
Abụ nke 44 na Ekpere
Ụlọ Nche Nke Na-ekwusa Alaeze Jehova (Nke A Na-amụ Amụ)—2020
Isiokwu A Na-amụ Amụ nke 20: Julaị 13 ruo 19, 2020
12 Ònye Bụ “Eze Ugwu” Taa?